သင့်အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ - Hello Sayarwon
ဝက်ခြံတွေဟာ အရေပြားရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့စေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အသားအရေရဲ့ အလှအပနဲ့ နူးညံ့ချောမွေ့မှုတို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝက်ခြံတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် သင့်အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ အရေးပါလာပါတယ်။
အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ဝက်ခြံကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မျက်နှာအရေပြားကို စနစ်တကျ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ ဝက်ခြံရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ အသားအရေကို အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းအောင် ထားဖို့က အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီနဲ့ အရေပြားဆဲလ်သေတွေရောနှောပြီး ချွေးထွက်ပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့ကာ ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်မျက်နှာအရေပြားကို စင်ကြယ်အောင် စနစ်တကျ ဆေးကြောသန့်စင်မှသာ အညစ်အကြေးတွေ၊အဆီပိုတွေနဲ့ အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆီတွေအားလုံးကို မျက်နှာအလွန်အကျွံသစ်ခြင်းက ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ပါပဲ။
ဆပ်ပြာအကြမ်းစားတွေ၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းချေးချွတ်ပွတ်တိုက်တာတွေ နဲ့ ဂျီးတွန်းဝတ်အကြမ်း အသုံးပြုခြင်းဟာ အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် (အထူးသဖြင့် ထိရှလွယ်တဲ့ အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေကိုပေါ့)။ သန့်စင်တဲ့ ရေနွေးနဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စားတို့ကို သုံးပြီး သင့်အရေပြားကို သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်ကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာအရေပြားကို အသာအယာဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးပစ်ပြီး ခြောက်သွားအောင် စောင့်ပါ။ သင်အသုံးပြုတဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စား ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာသစ်ဆေးတွေဟာ အဆီမပါဝင်သင့်ပါဘူး။
သင့်အသားအရေဟာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် (အဆီပြန်တာ၊ခြောက်သွေ့တာ ဒါမှမဟုတ် ထိရှလွယ်တာ) အစိုဓါတ် လုံလောက်ပြည့်ဝစွာရရှိအောင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အစိုဓါတ်ဟာ ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။
နေလောင်ခံ ခရင်မ် လိမ်းပါ။
နေလောင်ခံ ခရင်မ်တွေလိမ်းခြင်းဟာ သင့်အသားအရေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒါဏ်ကနေ ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေဟာ သင့်အသားအရေကို အားနည်းပျက်စီးစေပါတယ်။ တချို့ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေဟာ နေရောင်ခြည်ကြောင့် သင့်အသားအရေ ထိခိုက်နိုင်ချေကို ပိုလို့တောင် များစေပါသေးတယ်။
ဆရာဝန် ဆေးစာမလိုဘဲ ဝယ်သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးလေးတွေကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
ဒီဆေးတွေဟာ ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်တဲ့အတွက် အရေပြားအောက်မှာ ဝက်ခြံတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ ဝယ်သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးတွေမှာ ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေက benzoyl peroxide၊ salicylic acid (beta-hydroxy acid)၊ glycolic acid (alpha-hydroxy acid) အစရှိတာတွေပဲ ဖြစ်ပြီး သင်ဟာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အရေပြားပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ ဒီဆေးတွေကို သတိထား သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
အဆီမပါတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သုံးစွဲပါ။
အဆီပိုတွေဟာ အရေပြားဆဲလ်အသေတွေနဲ့ ရောနှောပူးပေါင်းပြီး မွေးညှင်းပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်တာမို့ ဝက်ခြံဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် “အဆီဓါတ်လုံးဝ မပါဝင်ပါ” လို့ အညွှန်းစာရေးထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသာ ရွေးချယ်သုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ညစ်ပတ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ မထိတွေ့ပါစေနဲ့။
“ညစ်ပတ်တဲ့ အရာ” တွေထဲမှာ သင့်လက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ညစ်ပေနေတဲ့ သင့်လက် ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဟာ မျက်နှာပေါ်ကို ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ သယ်ဆောင်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပြီး ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မယ်။
သင့်အနေနဲ့ တနေကုန် မိတ်ကပ်လိမ်းထားရပေမယ့် ပင်ပန်းနေတာမို့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ကို အပျင်းတစ်ကောင်း တစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ကပ်မဖျက်ဘဲ အိပ်ခြင်းဟာ မွေးညှင်းပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေတာမို့ အသားအရေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်မျက်နှာမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ အဆီနဲ့ ချွေးတွေဟာ ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနွေးနွေးနဲ့ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်လောက် ရေချိုးပေးပါ။ ရေအကြာကြီးစိမ်ချိုးခြင်းဟာ သင့်အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေတဲ့အတွက် ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
ဝက်ခြံတွေကို ဆိတ်ဆွနေခြင်းဟာ ပိုးဝင်စေပြီး အမာရွတ်တွေ ထင်ကျန်စေတဲ့အတွက် ထပ်မံကုသဖို့ လိုအပ်လာမှာဖြစ်တာမို့ လက်မဆော့ပါနဲ့။
ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ပိုလွယ်ပြီး အကျိုးလည်း ပိုရှိပါတယ်။ ဝက်ခြံကုသတာဟာ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲပေမယ့် ကာကွယ်ရတာ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဝက်ခြံဟာ လူအများစုမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံအန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Acne – Prevention.
Accessed November 13, 2016.
2. What Is Acne? Fast Facts: An Easy-to- Read Series of Publications for the Public.
3. 10 Tips for Preventing Acne.
4. Acne – Prevention.
ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ
သင့်ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးလာစေမယ့် အမူအကျင့် ၇ မျိုး